Shiinaha PLA Straws Caddaan Madow Madaw ah oo Kala Duwan Midab-kala-duwan Biyodegradable iyo Soo saarista Shiineeska Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Judin
Qaade Koobka Saxarka
Sanduuqa keega ee Daaqad leh
Saxan Warqadeed Dabool
Ka saar sanduuqa
Sanduuqa Cuntada Jiingadaha
Bandhiga Baakadaha Xirfadlayaasha ee USA iyo Europe
8-22oz High Transparent Disk...
PLA Cawska Caanaha Madow ee Caddaan
Cuntada la kaxeeyo ee saaxiibtinimo ku leh...
Sanduuqa Raashinka Warqadda ah ee P...
Isticmaalka Kaliya ee Eco Friendly Fre...
PLA Cawska Cadaanka ah ee Casaanka ah ee Midab-kala-duwan ee Biyodegradable iyo Soo saari kara Shiinaha
1. Qalabka: 100% PLA walxo
2. Daabacaadda: Logo la habeeyey waa la aqbali karaa
3. MOQ: 100000pcs
4. Baakaynta: la habeeyey, oo leh baakad waraaqo gaar ah oo la aqbali karo
5. Waqtiga keenista: 30-40 maalmood
email noogu soo dir U soo deji sidii PDF
* Qalabka heerka cuntada ee PLA
* Loogu talagalay naqshad kasta iyo cabbir kasta
*Taageero baakad shakhsi ah oo la aqbali karo
Waxaan leenahay 11 sano oo soo saarid iyo khibrad adeegga ganacsiga shisheeye ee alaabta waraaqaha.
Waxaan ka dhignaa koobka cuntada lagu baakadeeyo ama sanduuqa sidii muunado ama naqshaddaada si buuxda.
Iyada oo ku saleysan 8,000 oo mitir oo laba jibbaaran warshad, awoodda wax-soo-saarkeena waxay gaartaa in ka badan 50 weel HQ bishii.
Waxaan siinaa badeecooyin tiro ganacsi oo caan ah, sida Birgma ee Iswidhan, Carrefour ee Spain iyo France, iyo Lidl ee Jarmalka.
Waxaan haynaa mashiinka daabacaadda ee ugu waxtarka badan uguna horumarsan - Heidelberg, wuxuu ku siin karaa daabacaadda flexo, daabacaadda offset, iyo sidoo kale filim PET madow, shaabad dahab ah iyo teknoolojiyad kale.
Waxaan shahaado u haysannay EUTR, TUV iyo FSC….
1.Waa maxay qiimahaagu?
Qiimahayadu waa isbedeli karaan iyadoo ku xiran saadka iyo arrimaha kale ee suuqa.Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha la cusboonaysiiyay ka dib markii shirkaddaadu nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
2.Ma haysaa tirada dalabka ugu yar?
Haa, waxaan u baahanahay dhammaan amarrada caalamiga ah si aan u yeelanno tirada dalabka ugu yar ee socda.Haddii aad raadinayso inaad dib u iibiso laakiin aad u tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso boggayaga.
3.Ma keeni kartaa dukumentiyada khuseeya?
Haa, waxaan ku siin karnaa dukumeentiyada intooda badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta/U hoggaansanaanta;Caymis;Asalka, iyo dukumeentiyada kale ee dhoofinta marka loo baahdo.
4.Waa maxay celceliska wakhtiga hogaanka?
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 7 maalmood.Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag-bixinta dhigaalka.Waqtiyada hogaanka ayaa wax ku ool noqda marka (1) aanu helnay deebaajigaagii, iyo (2) waxaanu haysanaa ogolaanshahaada ugu dambeeya ee alaabtaada.Haddii wakhtiyada hogaanka aanu ku shaqaynayn wakhtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga.Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga.Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.
5. Waa maxay noocyada hababka lacag-bixinta ee aad aqbasho?
Waxaad ku bixin kartaa lacag bixinta akoonkeena bangiga, Western Union ama PayPal, 30% horudhac, 70% dheelitirka koobiga B/L.
6.Do ma dammaanad qaadaysaa keenista badbaado iyo ammaan ah ee alaabta?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh.Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa baakad khatar gaar ah oo loogu talagalay alaabada khatarta ah iyo kuwa rarida kaydinta qaboojiyaha ee la ansixiyey ee walxaha xasaasiga ah ee heerkulka.Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn waxay keeni karaan kharash dheeraad ah.
7. Intee in le'eg ayaan jawaab ku heli karnaa?
Caadiyan 6 saacadood gudahood.
Hore: Iibinta Kulul ee Faransiiska Daboolka Waraaqaha La Rafi Karo oo leh Dalool Iskutallaal/Sip ah oo loogu talagalay Koobka Kafeega
Xiga: Qiimaha ugu jaban Shiinaha 100% Eco Friendly Kaxee la tuuri karo weelka Saladhka ee Kraft oo dabool leh
Koobka Waraaqda Labeenta Barafka ee la tuuri karo ee la qaboojiyey
Shanta Xajmi ee XS-XL ee Sanduuqa Xaflada Sushi ee Qaadashada
Salad la tuuri karo oo cabbir badan leh oo leh shahaadada cuntada...
Gacan-gacmeedka Waraaqda ee Caadiga ah 12/16oz koob
Weelka Salad ee warqadda cuntada ee la tuuri karo
Dhaqanka qayb ka noqo